DIGAAGGA WAXAY KU DHACAAN CAGAHOODA: SABABAHA IYO DAAWEYNTA CUDURRADA. WAA MAXAY SABABTA DIGAAGGA, DIGAAGGA IYO BROOLLADA AY KA SOO BAXAAN BOORSOOYINKOODA, WAXA LA SAMEEYO - BEERAHA DIGAAGA
Meelaha miyiga ah, shimbiraha ugu badan ee guryaha lagu karsado waa digaag. Dabcan, milkiilayaashu waxay isku dayaan in ay siiyaan raashin fiican oo ay kormeeraan caafimaadka shimbiraha, laakiin mararka qaarkood waxaa jiri kara cuduro keena dhimashada xayawaanka.
Rachitis ama vitamin D-yarida
D-avitaminosis waa cudur daba-dheeraada kaas oo ay jirto dillaac digaagga lugaha, halka nidaamka lafaha ee shimbirku si buuxda u saameeyeen.
Waa muhiim! Maqnaanshaha daaweynta rickets, digaagga ayaa bilaabi doona in ay ukumo ukumo jilicsan, ka dib marka taas oo ukunta dhumucdeed la wada joojin doono.
Sababaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
la'aanta fitamiin D;
quudinta aan cillad lahayn;
la'aanta kalsiyum iyo fosfooraska;
guryaha digaaga oo liita.
Akhri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan noocyada ugu caansan ee digaagga: Ayam Tsemani, Bielefelder, Kuban Red, Indokury, Hubbard (Isa F-15), Amrox, Maran, Master Gray, Dominant, Redbro, Wyandot, Faverol, Adler Silver, Rhode Island, Poltava, Minorca, Andalusiyan, Ruush Caddaan (Baraf cad), Hisex Brown "iyo" Highsex White "," Pavlovskaya Golden "iyo" Silver Pavlovskaya. "
Marka uu jirro jiro, calaamadaha soo socda ayaa u muuqda:
shimbirtu waxay noqotaa wax aan waxba tarayn;
leexo lafaha tibia; digaagga waxay bilaabaan inay xaddidaan;
lafdhabarta lugaha iyo lugaha;
muuqaalka muuqaalka noduleska waxaa lagu sheegay meelihii feedhaha;
waxaa jira jilicsanaanta dhuubka iyo digaagga ee digaagga iyo digaagga, taas oo, maqnaanshaha daaweynta, waxay keenaysaa jilicsanaanta lafaha iyo dhimashada shimbirta.
Daaweyntu waa ku daridda fitamiinada iyo macdanta maadada ee liiska, taas oo ay ku jiraan kiimikada fosfateate, cunto cagaaran, iyo sidoo kale waxaa lagula talinayaa in la kordhiyo waqtiga socodka iyo helitaanka xayawaanka noolasha iftiinka.
Kahortaga rickets waa in la ilaaliyo saamiga saxda ah ee kalsiyumka iyo fosfooraska, xakamaynta qiyaasta ku filan shucaaca ultraviolet.
Gout (diathesis kaadida)
Gout waa cudur halis ah oo digaag ah, kaas oo kordhiya soo-saarka iyo isku-ururinta HOL, kaydka cusbada ee kudubyada lugaha iyo si toos ah ee jirka shimbirta.
Sababaha ugu weyn ee muuqaalka cudurka waxaa ka mid ah:
joogitaanka burooyinka digaagga oo ku xiran waxyaabaha ku jira sigaarka sigaarka;
quudinta xayawaanka muddo dheer hilib ama lafo ama cunto kalluun.
Haddii aad rabto in digaagaagu noqdo mid caafimaad qaba, hubi cudurada digaaga, hababka daaweynta iyo ka hortagga, gaar ahaan, coccidiosis, cudurrada faafa, colibacteriosis, pasteurellosis (daacuunka) iyo shuban.
Astaamaha soo socda ee turjubaanka waa kala duwan yihiin:
xayawaanka lime waxay ka muuqdaan koofiyada xirmooyinka;
korriinka lugta ee kor u kaca, adkaanta iyo deformo;
qoryaha ayaa ku kora dibedda lugaha;
digaagga ayaa adkaata in ay fuulaan, fadhiistaan, socdaan;
Xayawaanka shimbirta, waxay ku dhacaan lugahooda.
Ma taqaanaa? Digaagga gudaha ee lambarkoodu waxay ka badan yihiin tirada dadka ku jira meerkeenna ku jirta 3: 1.
Gout therapy waa caadigeynta cuntada oo ay ku habboon tahay in la yareeyo isticmaalka xayawaanka quudinta iyo quudinta miraha iyo cagaarka oo dhan.
Arthritis iyo tendovaginitis
Dhibaatooyinka waxaa lagu gartaa joogitaanka cudurrada caabuqa ee isku-dhafka cayayaanka ee digaagga, dareenka muruqyada. Waxay u sii socon kartaa sidii cudur gaar ah, ama waxaa lagu dhalin karaa cudurro fayrus ah ama bakteeriyo, kuwaas oo ah:
Badanaa cudurku wuxuu dhacaa sababo la xiriira xaqiiqda ah in shimbiruhu ku socdaan dhulka wasakhda ah.
bararka ayaa bilaabmaa oo muuqaalkuna wuxuu ka yimaadaa dhibco casaan ah oo ku yaala kala-goysyada;
heerkulka xirmooyinka ayaa kor u kacaya, way dhaawacmaan;
Shimbirraha cagahooda midna ma taagna, laakiin jajab buu qabaa.
Beeraleyda digaagga ee khibrad leh waa inay bartaan sida loo daweeyo loogana hortago cudurrada digaagga, iyo sidoo kale sida loo daweeyo cudurrada aan lays qaadsiin ee digaagga.
Daaweynta isticmaalida antibiyootikada iyo wakiilada fayraska:
ampicillin, 15-20 mg / kg;
polymyxin-M sulfate (50000Ud halkii kg ee miisaanka shimbir).
Daawooyinkan waa in lagu qasaa cunto ama shan jeer lagu qasi jiray biyo.
Cudurkaan waxaa ku jira barar ku dhaca maqaarka ku yaal qoorta cawska, haddii uu jiro boogo, dildilaacyo, jarid.
Sababta ugu weyn ee cudurku waa dayactirka noolaha ku nool dhulka wasakhaysan, taajirada cidhiidhiga ah, iftiinka yar iyo hawo-qaadista.
Calaamadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah:
shimbirta ayaa ciriiri doonta cagta cufan;
dulqaadka maqaarka ayaa dhacaya;
waxaa jira xanuun marka la riixayo;
Bacda loo yaqaan 'buste' ayaa u muuqda unug.
Waa muhiim! Fitamiin B la'aanta ayaa sababi kara qulqulo iyo cudurro badan.
Daaweyntu waxay ka kooban tahay ciribtirka calaamadaha adoo ku daraya fitamiino diyaargarow si ay u quudiyaan, haynta digaag nadiif ah, ku dhejisid cawlaha leh tetracycline, bataatada syntomycin. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa saliid kalluun.
Caabuqa dib u soo noqnoqda ee digaagga
Waa cudur faafa kaas oo uu jiro xanuunka oo ka yimaada geedi socodka bararka ee ku dhaca lidka iyo lugaha lugaha. Wakiilka keena cudurka - reovirus.
Astaamaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
lameness iyo dhaqdhaqaaqa socodka ee digaagga;
boogta ulcerative of bacriminta articular ah;
quudinta si buuxda ma loo tirin;
midabka maqaarku wuu lumayaa;
miisaanka iyo ukunta-dhicinta ayaa la dhimay.
Daaweyntu waxay ka kooban tahay tallaal marxaladaha hore ee cudurka.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh inaad barato waxa la sameeyo haddii digaagga si fiican u soconin, muddada ukunta wax soo saarka ee digaagga jilicsan, sida loo kordhiyo wax soo saarka ukumaha xilliga jiilaalka iyo qiimeynta digaagga digaaga.
Waa cudur faafa oo faafa, oo ah wakiilka keena staphylococcus purulent. Xaaladaha badankood, cudurku wuxuu la socdaa arthritis, dermatitis, septicaemia.
dhaawaca daran ee ku dhaca xubnaha;
joogitaanka jeermiska cudurada;
Qiyaastii 80-90% digaagga ayaa u dhinta cudurkan. Sida daaweynta, antibiyootikada ayaa loo isticmaalaa, taas oo xooluhu ku habboon tahay inuu xakameeyo kiis gaar ah oo infekshan ah.
Digaagga waa in ay helaan cuntooyin kala duwan oo nafaqo leh, taas oo ka kooban hadhuudh, qamadi, ari, miro, karootada iyo baradhada la kariyey.
Wakiilka keena cudurkan waa fayraska herpes DNA. Calaamadaha ugu waaweyn waa kuwa soo socda:
xoqin xoog leh;
baalashooda iyo daboolka;
midabka irid isbeddelka;
hoos u dhaca cuntada iyo hoos u dhaca miisaanka.
Ma taqaanaa? Ayam Chemani ayaa digaagadu ka duwan tahay qaraabadooda marka ay midabkeedu yahay: Midabkooda, baalashooda, maqaarka, iyo xataa lafaha iyo xubnaha gudaha waxay leeyihiin midab madow.
Nasiib darro, ma jiraan wax daawo ah oo lagula dagaallamo cudurkan. Haddii goobta laga helo infekshanka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu sameeyo daaweynta antiviral, galaan karantiilka, marmarka qaarkoodna - qabso qoryaha. Si looga hortago dhacdada cudurka, waxaa lagu talinayaa in la tallaalo shimbiraha.
Digaagga waxay ku xiran yihiin cuduro badan, oo aan u baahnayn in ay xayawaanka ku soo bandhigaan cudurrada, waxaa lagama maarmaan ah in ay sameyso daryeel habboon, kormeerida nafaqada iyo si joogta ah u fuliyaan imtixaannada ka hortagga caafimaadka xoolaha iyo talaalka.
Isticmaal celin ku saabsan sababta digaagga u dhacaan cagahooda
Waxaa laga yaabaa in digaagga aan lahayn fitamiin iyo macdano ku filan, gaar ahaan - kalsiyum. Calcium ayaa loo baahan yahay iyo digaagga marka ay koraan, iyo digaagdaha qaangaarka ah ee loogu talagalay sameynta qolofta ukunta. Waxaa jira fitamiino iyo macdanin dheeri ah oo loogu talagalay digaagga, waxaadna ku dari kartaa qolofka, qolofka, jeesada ama qolofka.
Tani waxay noqon kartaa cudurrada cudurka knemidokoptoz ee ay keento tuubooyinka yaryar, kuwaas oo laga yaabo inay ku jiraan qashin, ee ku jira feederiyaha, xajmiga. Marka maqaarka la qafiifiyo, dulin ayaa ka soo baxa marinnada, waxay ku sumoobaan xubnaha. Waa lagama maarmaan in cagaha shimbiraha lagu xakameeyo xabbad diiran oo biyo qoto dheer leh (hozmyla), ka dibna ku dheji balka balka.
Celcelis ahaan, luminta calcium ee ka soo baxa qalfoofka ka dib qulqulka 6 ukun qiyaastii 40%, iyo qaybaheeda kala duwan ayaa ka qaybqaadanaya nidaamkan si aan kala go 'lahayn: lafaha yaryar ayaa lumiya maaddooyinkooda wax yar, iyo feeraha, naasaha iyo dumarka - ilaa 50%.
Hoos u dhac weyn oo ku yimaada kalsiyum serum waxaa la socda tetany iyo hoos u dhac ku yimaada borotiinka guud. Iyadoo hoos u dhac ku yimaada kaalshiyamka dhiigga ee digaagga ayaa loo yaqaan acidotic state. Kaadida dhiigga ee lafaha gaar ahaan lafta laabta ee leh lafdhabarta.
Cudurkan waxaa la yiraahdaa Knemidokoptoz. Feetku wuxuu saameeyaa jilibyada. Waxaad arki kartaa - muuqaalka kore ee wasakhda cad-cad ee lugaha, digaagga ayaa bilaabanaya inay jeexaan, sababtoo ah cuncun ba'an. Cagaha waxaa la geeyaa 1 daqiiqo oo ah nooc gaar ah. 10 maalmood kadib, ku celi.